राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वमा निजीक्षेत्र आशावादी छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वमा निजीक्षेत्र आशावादी छ
अन्तरवार्ता, मुख्य खबर 26 views
राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वमा निजीक्षेत्र आशावादी छ
सत्यनारायण क्याल अध्यक्ष, क्याल समूह
अध्यक्ष, क्याल समूह
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योग–व्यवसायमा सक्रिय सत्यनारायण क्याल औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना क्याल समूहका अध्यक्ष हुन् । मुलुककै औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा अधिकांश लगानी केन्द्रित गरेको यो समूह निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा विशेष दक्षता राख्दछ । क्यालको नेतृत्वमा समूहले पछिल्लो समयमा उद्योग र व्यापारका नयाँ–नयाँ आयामहरूमा आक्रामकरूपमा लगानी विस्तार गरिरहेको छ । यो औद्योगिक र व्यापारिक समूहअन्तर्गत अहिले दर्जन बढी उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठान सक्रिय छन् । लगानीमैत्री वातावरणका निम्ति अत्यावश्यक भौतिक तथा कानूनी पूर्वाधारको पूर्णताको आवश्यकता औंल्याउने क्याल मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य स्थायित्व र विकासको आधार निर्माणका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसर भएकोमा स्पष्ट छन् । प्रस्तुत छ, समसामयिक अर्थराजनीतिक अवस्था, सम्भाव्यताको दोहन र समस्याहरूको सापेक्ष निकासका बारेमा अध्यक्ष क्यालसित आर्थिक अभियानमा ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी :
तपाईंले पछिल्लो समयमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाइरहनुभएको छ । नेपालमा उत्पादनमूलक उद्यमको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
नेपाल अल्पविकसित देश भएकाले यहाँ विकास निर्माणको आवश्यकता र अवसर पनि उत्तिकै छ । हाम्रो समूह विशेष गरी निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा केन्द्रित भएकाले पनि स्वाभाविकरूपमा विकास निर्माणको बढ्दो आवश्यकता यस्ता उत्पादनहरूका लागि अवसर हो । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्ने उद्देश्य राखेको छ । यसका लागि विकासका अन्य सूचकसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको सबल अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन अभिवृद्धिको विकल्प पनि छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभिप्रायमा सबै लाग्नु पर्दछ । यसबाट रोजगारी, राजस्व, आर्थिक र सामाजिक विकासलगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएर र उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ । अहिले यतापट्टि नीति निर्माताको चासो गएको पनि देखिन्छ । राजनीतिले विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । निजीक्षेत्र त पहिल्यैदेखि यसको पक्षमा उभिएकै हो । यसको रूपान्तरण सापेक्षरूपमा हुने हो भने उत्पादन क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ ।
औद्योगिक र व्यापारिक वातावरणको समग्र अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामीकहाँ उद्योग–व्यापार फस्टाउने सम्भावना प्रशस्तै छन् । तर, समस्याहरूको पनि कमी छैन । जसलाई समाधान गर्न सकियो भने सम्भाव्यताको उचित उपयोग हुन सक्दछ । उद्योग र व्यवसायका समग्र सम्भाव्यताहरूको समुचित दोहन हुन सकेको छैन । सरकारले तीव्र आर्थिक विकासको लागि उत्पादनमा लगानी आह्वान गरिरहेको छ । प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी आउन सकेको छैन । प्रतिबद्धता आउनु भनेको सम्भावनाको कारण हो । तर, प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी नआउनुले आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको सङ्केत गर्छ । यसले स्वदेशका लगानीकर्ताको मनोबल पनि प्रभावित पारिरहेको छ । यसकारण सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिमा भर पर्छ । उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा भौतिक तथा कानूनी सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति चाहिन्छ । अहिले पनि कतिपय अत्यावश्यकीय कानूनी आधार निर्माण हुन सकेका छैनन् । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई अग्रभागमा राखेको बताए पनि राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण त्यतातिर चाहिएजति ध्यान दिन सकेको थिएन । अब अत्यधिक बहुमतसहितको नयाँ सरकार निर्माणसँगै राजनीतिक स्थायित्व आउँछ र यसले लगानीको वातावरणलाई बलियो बनाउँछ भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा छ । अहिलेसम्म राजनीतिकसँगै आर्थिक गतिविधिहरू पनि सङ्क्रमणको सकसबाट गुज्रिइरहेका थिए । राजनीतिक सङ्क्रमणले निकास पाएर आर्थिक विकासको तीव्र गतिमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुको अर्को सहज उपाय पनि छैन । प्रत्येकजसो राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा विकासलाई मुख्य एजेण्डाका रूपमा राखेका छन् । अब पर्खाइ त्यसको रूपान्तरण कस्तो हुन्छ भन्नेमात्र हो ।
नेपालमा लगानी गर्न के कुराले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ ?
देश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको संरचना व्यवस्थापनका लागिमात्रै खर्बौं रुपैयाँबराबरको नयाँ निर्माणको खाँचो पर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता थियो । राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति समात्न सकेका थिएनन् । राजनीतिक नेतृत्वले अब राजनीतिक लडाइँ सकिएकाले पनि आर्थिक विकासका केन्द्रीकृत हुने बताइरहेको छ । यो अबको आवश्यकता पनि हो । यसो हुँदाखेरि स्वतः बाटोघाटो, पुल, विद्युत् परियोजना, सिँचाइ पूर्वाधारलगायतको निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सँगै अन्य सरोकारका उत्पादनको मागमा पनि स्वाभाविकरूपमा वृद्धि हुन्छ । यस्ता आधारहरूले देशमा उत्पादन क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई विस्तार गर्ने काम गरेको छ । लगानीकर्ता पनि उत्साहित छन् । लगानीकर्ताको यो उत्साहलाई सरकारले विकासको अभियानमा समाहित गराउन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ ।
देश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसकेको छ । उद्योग व्यापारको विकास र विस्तारमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुभएको छ ?
राजनीतिक र आर्थिक अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणका लागि यो शासन व्यवस्था अपनाइएकाले यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । यसलाई कसरी लगानी र विकासमैत्री बनाउने भन्ने विषय यसको कार्यान्वयनको पद्धतिमा भरपर्ने कुरा हो । यो राजनीतिको हातमा छ । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आआफ्नो दायित्व र अधिकार तोकिदिएको छ । त्यसका प्रावधानलाई हेर्दा सङ्घीयतामा दोहोरो/तेहेरो करको भार पर्ने हो कि भन्ने आशङ्का पनि छ । यस्तो भएमा यसले लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउँदैन । यसमा बहस पनि भएका छन् । निजीक्षेत्रले राजनीतिको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । सङ्घीयता हाम्रा लागि नयाँ प्रयोग भएकाले केही समस्या हुन सक्छन् । समस्याको सापेक्ष निकास र विकासका आयामहरूमा कसरी रूपान्तरण गर्दै जाने भन्ने कुरा त राजनीतिक दक्षतामा भर पर्ने विषय हो ।
हामीकहाँ चलनचल्तीकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । उत्पादनका नयाँ क्षेत्रको पहिचान र दोहनमा लगानीकर्ताको ध्यान किन केन्द्रित हुन नसकेको होला ?
यसमा राजनीतिक अस्थिरता र दीर्घकालीन नीतिनियमको अभाव मुख्य कारण हो । अब राजनीतिक स्थायित्वको सङ्केत देखिएको छ । नयाँ क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । कतिपय यस्ता लगानीका क्षेत्रको उपयोग हुनै सकेको छैन । त्यस्ता क्षेत्रको उचित तरिकाले सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन पाएको छैन । नयाँ क्षेत्रमा सम्भाव्यतासँगै जोखीम पनि छ । नेपालको सानो बजारका कारण पनि यसका प्रभाव पारिराखेको छ । सरकारले यस्ता केही क्षेत्रमा हात हालेको भए पनि सरकारी दक्षताले त्यसलाई सफल तुल्याउन सम्भव छैन । अब राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएकाले पनि अब बन्ने सरकारले त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान र दोहनका निम्ति प्रोत्साहनको नीति लियो भने नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई निजीक्षेत्रले कसरी नियालिरहेको छ ?
विगत एक दशकभन्दा लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा बित्यो । यो समयमा उद्योगधन्दाको अपेक्षित विकास हुन सकेन । उद्योग व्यापार क्षेत्रले धेरै समस्या झेल्नु पर्योक । अब राजनीतिक सङ्क्रमणले निकास पाएर आर्थिक विकासको गति समात्ने आशा जागेको छ । राजनीतिले पनि अब आर्थिक विकासलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर अघि बढ्ने बताइराख्दा उत्पादन क्षेत्रमा सक्रिय निजीक्षेत्र आशावादी बनेको छ । अहिले मुलुकमा वाम गठबन्धनको अत्यधिक बहुमत देखिएको छ । यो जनताले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास चाहेको प्रमाण हो । यसले राजनीतिक अस्थिरताको समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व भयो भने यसबाट आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको ढोका खोल्ने अवस्था बन्न सक्छ । अबको राजनीतिले यो उपलब्धिलाई आर्थिक विकासको बाटोमा लैजानेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । अबको राजनीति विकासमा केन्द्रित हुनै पर्छ । राजनीतिक आस्था र आग्रह जेजस्तो भए पनि आर्थिक विकासका एजेण्डा साझा हुनु पर्दछ । त्यसमा सबैले सहकार्य गर्नु पर्दछ । यसरी मुलुक आर्थिक अग्रगतितिर उन्मुख हुन सक्छ ।
राजनीतिमा निजीक्षेत्रको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता बढ्न थालेको छ । यसलाई आर्थिक विकासको अभीष्टमा कसरी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ?
विश्वको अर्थराजनीतिलाई नै हेरौं । आर्थिक विकासको आधारस्तम्भ भनेकै निजीक्षेत्र हो । राज्यले विकासका लागि निजीक्षेत्रसँग सार्थक सहकार्य गरेरमात्र विकासको उचाइ छोएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । वास्तवमा आर्थिक समृद्धिको चालक नै निजीक्षेत्र भएकाले यसका समस्या र समाधानका उपायमा पनि उनीहरूको दक्षता बढी हुनु स्वाभाविक हो । नीति निर्माणको तहमा निजीक्षेत्रको सहभागिता यस अर्थमा पनि सहयोगी हुन सक्छ । विकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयनका निम्ति निजीक्षेत्रका अनुभवीहरूको दक्षतालाई उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । निजीक्षेत्रसितको साझेदारीलाई परिणामुखी बनाउनु पर्दछ । लगानीमैत्री नीति र नियम कानून बनाउने राजनीतिले हो । र, राजनीतिमा निजीक्षेत्रका अनुभवी र दक्ष व्यक्तित्वहरूको सहभागिताले यो उद्देश्यलाई सहज बनाउन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
अहिलेका कानूनी र भौतिक पूर्वाधारहरू लगानीमैत्री छन् ?
पर्याप्त नभए त्यसको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नयाँ श्रम ऐन आएका छन् । अब यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । उद्यमीले अवसरको पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ । उचित समय, स्थान र अवसरको पहिचान हुन सक्यो भने लगानीबाट प्रतिफल लिन सकिन्छ । केही वर्षयता नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ लागानी आइरहेको पनि छ । लगानीबाट कसरी बढी प्रतिफल लिने भन्ने कुरामा उद्यमीको दक्षतामा पनि भरपर्ने विषय हो । कहीँ पनि शत प्रतिशत सकारात्मक अवस्था हुँदैन । त्यसलाई आफूअनुकूल बनाउने काममा लगानीकर्ताको दक्षता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिलेको श्रम सम्बन्ध र यसको आपूर्तिको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले पनि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध त्यति सन्तोषजनक छैन । नयाँ श्रम ऐनले सुधारको प्रयास त गरेको छ, तर पर्याप्त छैन । नियमावली अझै आएको छैन । नियमावली निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा गइसके पनि स्पष्ट हुँदै जाला । अर्कातिर अहिले पनि उत्पादन क्षेत्रका लागि दक्ष कामदारको अभाव सामना गर्नु परिरहेको छ । यता अभाव छ, अर्कातिर कामदारमा विदेश पलायनको प्रवृत्ति बढेको छ । उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण भएमा रोजगारीका अवसरहरू पनि स्वतः अभिवृद्धि हुन्छन् । एकातिर लगानीको अपेक्षित वातावरण नहुनु र अर्कातिर आवश्यकताअनुसारको दक्षताप्राप्त जनशक्ति नहुनुले बेरोजगारीको खाडल बढाएको हो । लगानीको वातावरण बनाएर यहीँ रोजगारीका अवसरको उत्पादन गरिनु दिगो आर्थिक विकासको आधार हुनेछ । श्रम क्षेत्रमा राजनीतीकरण बढी छ । यो मुख्य समस्या बनेर उभिएको छ । यस्तो बेथितिको समाधान हुनु पर्छ । राजनीति यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
यसको समाधान कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ । युवा भनेको देश निर्माणको आधार हो । अहिले हाम्रो जनसङ्ख्यामा युवाको सङ्ख्या बढी छ । यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर, यो ऊर्जाशील शक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन । सरकारले यो अवसर उपयोगको वातावरण बनाउन सक्यो भने समग्र अर्थतन्त्रकै पुनर्संरचना हुनेछ । यस्तो जनसाङ्ख्यिक अवसर सधैं रहँदैन । युवा शक्तिलाई दक्ष बनाएर राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र त्यसअनुसारको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । मानव संसाधनको विकासमा लगानी बढाउनु पर्छ ।
नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?
उत्पादनको लागत न्यूनीकरण, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाका लागि नवीन प्रविधिको उपयोग नगरी हुँदैन । यो सत्यलाई स्वदेशी उद्योगले आत्मसात् गरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा आएका उद्योगमा त नवीन प्रविधि हुने नै भयो । पीएलसी प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । हाम्रो समूहले ल्याएका नयाँ उद्योग पनि यही प्रविधिमा आधारित छन् । स्वचालित प्रविधिले लागत न्यूनीकरण गरेर उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्छ । पुरानो प्रविधिमा खुलेका उद्योगले पनि आफूलाई अद्यावधिक गर्दै लगेका छन् । यो उत्पादन क्षेत्रका लागि अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ ।
अहिलेको पारवहनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? उत्पादनका लागि पारवहनको उपलब्ध प्रबन्ध कत्तिको सहज छ ?
असहज पारवहन एउटा मुख्य समस्या बनेको छ । यो समस्या पहिलाभन्दा अहिले झन् बढेको छ । वर्षेनि व्यापार बढेको छ । उद्योग पनि थपिएकै छन् । सवारी र ढुवानीका साधनको चाप बढेको छ । तर, त्यसको अनुपातमा सडक र अन्य आवश्यकीय पूर्वाधारको विस्तार हुन सकेको छैन । आन्तरिक ढुवानीमा समस्या छ । भूपरिवेष्ठित देश हुनुका कारण बाह्य देशसँगको व्यापारमा पनि पारवहनका समस्या छन् । समुद्री मार्ग, बन्दरगाह, रेल र स्थलमार्ग सबैतिर अनपेक्षित जरीवानाको भार उठाउनु परिरहेको छ । समग्रमा पारवहनको अहिलेको अवस्था सकारात्मक छैन । रणनीतिगत रूपमै सुधारको खाँचो छ ।
तपाईंको औद्योगिक समूह वीरगञ्ज क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुको कारण के हो ?
वीरगञ्ज औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिकै केन्द्र हो । वैदेशिक व्यापार र आन्तरिक बजारमा पहुँच यहाँबाट तुलनात्मक सहज छ । समुद्री बन्दरगाहबाट सबैभन्दा नजिकको नाका र रेलवे सेवा जोडिएको हुनाले औद्योगिक प्रविधि र कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज छ । देशको मध्यभागमा रहनुका कारण उत्पादनको ढुवानी सजिलो छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसितको दूरी पनि यहाँबाट नजीक पर्छ । अहिले पनि उत्पादन वीरगञ्जमा हुन्छ, उपभोक्ता काठमाडौं उपत्यकामा बढी छन् । यहाँँबाट उत्पादनको आपूर्ति सहज छ । मुख्य नाका, सुक्खा बन्दरगाह, निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक सडक, द्रुतमार्ग, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोरलगायतका कारण वीरगञ्ज क्षेत्रमा स्वाभाविक आकर्षण छ ।
यति सम्भाव्यता भएर पनि वीरगञ्ज–पथलैया क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर बनाउने निजीक्षेत्रको प्रस्ताव अझै सफल हुन सकेन किन होला ?
वीरगञ्ज तथा आसपासका क्षेत्रमा उपलब्ध, निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका पूर्वाधारहरू नै वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउने आधार हुन् । यो क्षेत्रको आर्थिक विशिष्टतालाई स्थापित गरेर सम्भावनाको दोहन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले यो तथ्यलाई नबुझेको पनि होइन । यसका लागि नीतिगत सुधार र कानूनी प्रबन्ध आवश्यक छ । सरकार र निकायहरूले बारम्बार प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका पनि छन् । अब यसको पूर्णतामा विलम्ब गर्ने बेला छैन ।